ဘာသာစကားလေ့လာနည်းအတွေးစများ(၁) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 28, 2011 at 14:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုလေ့လာရာမှာ အသုံးဝင်မယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ၊ သင်ဆရာမြင်ဆရာတစ်ချို့ရဲ့နည်းတွေ၊ တစ်ချို့ကို အင်တာနက်ဆောင်းပါးတွေထဲက သဘောကျတာလေးတွေ ရောပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်၊ အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ယူပြီးသုံးနိုင်ကြပါစေ။
input input input input input input input input input input input input input input
exposure exposure exposure exposure exposure exposure exposure exposure
ဒီစကားလုံးနှစ်လုံးကို မန္တာန်ရွတ်သလို အမြဲသတိရနေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘ၀က စကားပြောတတ်ဖို့ နှစ်နှစ်ကျော်မျှ တစ်ချိန်လုံး ဘေးနားက အဖေ အမေ အဖိုး အဖွား တွေပြောသမျှနားထောင်ခဲ့ရတာ မှတ်မိ ကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာစကား တစ်ခုကို ကြားရတာများလာတာနှင့်အမျှ နားထဲမှာစွဲသွားပြီး အလိုလို နားလည်လာ တတ်တာကို language acquisition လို့ပညာရှင်တွေကတော့ပြောကြတယ်ခင်ဗျ။ ဟုတ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တီဗွီမှာ မကြာခဏ တရုတ်ကားတွေပြတုန်း ကတော့ “ကျူမီနာ” ”နီကျိုက်နာလီ” “ဝေါမီထောဖော” ဆိုတာတွေ အလိုလို တတ်လာခဲ့တယ်။ အခု ကိုရီးယားကားတွေကျ တော့ ကျွန်တော်တော့သိပ်မကြည့်လို့မသိဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေက တော့ ကိုရီးယားလိုဖုန်းထူးတာတို့၊ နှုတ်ဆက်တာတို့ တတ်နေကြပြန်ရော။ ဒီတော့ ဘယ်ဘာသာ စကားကိုမဆို လေ့လာနေပြီဆိုတာနဲ့ language input ရနိုင်သမျှရအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ input ဆိုရာမှာ listening input, reading input ကိုတော့ဖြင့်လူတိုင်းကသိကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကတော့ listening ကိုပိုပြီးအားသန်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နည်းနည်းအပျင်းထူတတ်တဲ့သူဆိုတော့ အတွက် နားထောင်ရုံလေးနဲ့တင် အဆင်ပြေ သွားတာကိုး။ listening က အသံထွက်(pronunciation), လေယူလေသိမ်း(accent), ဒေသသုံး(dialet), စတာတွေကို သိနိုင်တယ်လေ။ စာလုံးပေါင်းတော့မသိဘူးပေါ့။ reading ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အများစု သဲယား(there), ၀ှဲယား(where) တို့ ထွက်ခဲ့တာ ဒီလို မှန်ကန်တဲ့ listening input မရှိခဲ့လို့ပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်ပြီ။ နားထောင်ရမယ်။ ဘာတွေကို နားထောင်မလဲ။ ဘယ်လိုမျိုးနားထောင်မလဲ။
Stephen Krashen ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဒီလိုဆိုထားတယ်ဗျ။
The best methods are therefore those that supply 'comprehensible input' in low anxiety situations, containing messages that students really want to hear. These methods do not force early production in the second language, but allow students to produce when they are 'ready', recognizing that improvement comes from supplying communicative and comprehensible input, and not from forcing and correcting production." Stephen Krashen
ကိုယ်နားလည်တဲ့အဆင့်ကစပါ။ အခြေခံလောက်ပဲရှိတဲ့သူက CNN တို့ BBC တို့လိုသတင်းတွေ သွားနားထောင် လို့ဘယ်ရမလဲ။ ဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်ပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုနားထောင်ရမှာပေါ့။ ကျွန်တော် နားထောင်လေ့ရှိတဲ့ program တွေကတော့
ဒီ link တွေကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး spotlight radio ကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို ပုံပြောသလိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသွားတဲ့အတွက်အင်မတန်မှ လွယ်ကူပါတယ်။ mp3 နဲ့ပြောသွားတဲ့စာသား script တွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ရင် download လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်စိတ်ဝင် စားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို download လုပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာ computer ရှိရင် အိမ်မှာနားထောင်။ မရှိရင်လည်း internet ဆိုင်သွားနားထောင်လို့ရပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ electronic ပစ္စည်းတွေအရမ်းပေါလာတော့ ပညာ လေ့လာရာမှာအသုံးချတတ်တဲ့သူအတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ computer မရှိရင်လည်း DVD player လောက်တော့အိမ်တိုင်းနီးပါးရှိနေပြီပဲ။ USB plug ထိုးလို့ရတဲ့ speaker လေးတွေကလည်း ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျော်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက mp3, mp4 တို့ ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ သူဆိုရင်လည်း ဖုန်းဆိုတာ learning tool တစ်ခုပါလားဆိုတဲ့အသိလေးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကို ခုနက mp3 ဖိုင်လေးထည့်၊ သွားလေရာ ကားစီးရင်း၊ ကားစောင့်ရင်း၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းနားထောင်နေပေါ့။ အပျင်းလည်းပြေ၊ ပညာလည်း ရတာ ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ mp3 ဖွင့်ထားပြီးနားထောင်ရင်းအိပ်ပျော်သွား၊ အိပ်မက်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လိုစကားတွေပြောနေခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေမနည်းတော့ပါဘူး။
ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ပထမဦးဆုံးတစ်ပုဒ်လုံးပြီး အောင်နားထောင်ပါ။ သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကို နှလုံးသားနဲ့ခံစား နားဆင်ပါ။ ဒါမှ နှစ်သက်မှု ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာကို မှတ်မိနေတတ်တာလူတွေရဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲလေ။ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်တဲ့အခါမှာတော့ ဦးနှောက်ကိစ္စလေးနည်းနည်းပါလာပါပြီ။ tracking method လို့ခေါ်တဲ့ ရှေ့ကပြောတဲ့သူ စကားစုတစ်ခုစာလောက်ပြီးသွားရင် pause ခဏလုပ်၊ ကိုယ်ကအသံထွက်ပြီးလိုက်ရွတ် ကြည့်၊ နောက်ရှေ့ကိုဆက်သွား။ ဒီလိုနဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို အနည်းဆုံး လေးငါးခေါက်လောက်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါ presenter ရဲ့အသံထွက်နဲ့လေယူလေသိမ်းကအစနားထဲမှာစွဲနေပါလိမ့်မယ်။ နားထဲစွဲရာကလိုအပ်လို့ကိုယ်ပြောရမယ့် အလှည့်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူပြောနိုင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကျွန်တော် ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တာများပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ dialogue ကလေးတွေ့ပြီဆိုရင် အဲဒါကို mp3 ဖြစ်အောင် record လုပ်ပြီးပြန်နားထောင်တတ်ပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ ဥပမာအားဖြင့် vlc player သုံးတယ်ဆိုပါဆို့။ ၄င်း player နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီး ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကို record button နှိပ်ပြီးသိမ်းထားလိုက်တာပါပဲ။ အင်မတန်အကျိုးရှိတဲ့နည်းလမ်းပါ။ဒါကိုမှ လုပ်ရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ site များမှာလုပ်ပြီးသား clip တွေကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
exposure ဆိုတာကတော့ ဘာသာစကားနဲ့အထိအတွေ့ကိုပြောတာပါ။ တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ "Do something in English everyday." ဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ဘာသာ စကားနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေမှာသာတစ်နေ့ကျရင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာမှာပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ဒီဘာသာစကားကို အသုံးပြုတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကိုရောက်အောင်ကြံဆနေရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း နောက်ပြော လေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ဂျပန်စကားတတ်ချင်ရင် ဂျပန်မကိုရည်းစားထားဆိုသလောက်တော့ လုပ်ဖို့ မလိုသေး ပါဘူး။ IT ခေတ်ရဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့ အင်တာနက်မှာ chatting ထိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုလေ့ကျင့် နိုင်ပါတယ်။
ွှTip တစ်ခုနဲ့တင်ရေးတာ နည်းနည်းရှည်သွားပြီ။ အလျှင်းသင့်ရင်သင့်သလို နောက်ထပ် Tips များကိုလည်းဆက်ရေးပါဦးမယ်။
ပညာသင်ပေးခဲ့သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများ၏ကျေးဇူးတို့ အား ဤ site တွင်တင်သောဆောင်းပါးများဖြင့် ပူဇော်ကန်တော့ပါသည်။
ဘာသာစကားအသဈတဈခုလလေ့ာရာမှာ အသုံးဝငျမယျ့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျသုံးခဲ့တဲ့နညျးလမျးလေးတှေ၊ သငျဆရာမွငျဆရာတဈခြို့ရဲ့နညျးတှေ၊ တဈခြို့ကို အငျတာနကျဆောငျးပါးတှထေဲက သဘောကတြာလေးတှေ ရောပွီး တငျပွလိုကျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောမယျ၊ အဆငျပွမေယျ့နညျးလမျးလေးတှကေို ယူပွီးသုံးနိုငျကွပါစေ။
ဒီစကားလုံးနှဈလုံးကို မန်တာနျရှတျသလို အမွဲသတိရနပေါ။ ကြှနျတျောတို့ကလေးဘ၀က စကားပွောတတျဖို့ နှဈနှဈကြျောမြှ တဈခြိနျလုံး ဘေးနားက အဖေ အမေ အဖိုး အဖှား တှပွေောသမြှနားထောငျခဲ့ရတာ မှတျမိ ကွပါလိမျ့မယျ။ ဘာသာစကား တဈခုကို ကွားရတာမြားလာတာနှငျ့အမြှ နားထဲမှာစှဲသှားပွီး အလိုလို နားလညျလာ တတျတာကို language acquisition လို့ပညာရှငျတှကေတော့ပွောကွတယျခငျဗြ။ ဟုတျမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ တီဗှီမှာ မကွာခဏ တရုတျကားတှပွေတုနျး ကတော့ “ကြူမီနာ” ”နီကြိုကျနာလီ” “ဝေါမီထောဖော” ဆိုတာတှေ အလိုလို တတျလာခဲ့တယျ။ အခု ကိုရီးယားကားတှကြေ တော့ ကြှနျတျောတော့သိပျမကွညျ့လို့မသိဘူး။ သူငယျခငျြးတှကေ တော့ ကိုရီးယားလိုဖုနျးထူးတာတို့၊ နှုတျဆကျတာတို့ တတျနကွေပွနျရော။ ဒီတော့ ဘယျဘာသာ စကားကိုမဆို လလေ့ာနပွေီဆိုတာနဲ့ language input ရနိုငျသမြှရအောငျ လုပျသငျ့ပါတယျ။ input ဆိုရာမှာ listening input, reading input ကိုတော့ဖွငျ့လူတိုငျးကသိကွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကတော့ listening ကိုပိုပွီးအားသနျတယျဗြ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ နညျးနညျးအပငျြးထူတတျတဲ့သူဆိုတော့ အတှကျ နားထောငျရုံလေးနဲ့တငျ အဆငျပွေ သှားတာကိုး။ listening က အသံထှကျ(pronunciation), လယေူလသေိမျး(accent), ဒသေသုံး(dialet), စတာတှကေို သိနိုငျတယျလေ။ စာလုံးပေါငျးတော့မသိဘူးပေါ့။ reading ဆိုရငျတော့ ဒီလိုမြိုးအခကျြအလကျတှေ ရမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့အမြားစု သဲယား(there), ၀ှဲယား(where) တို့ ထှကျခဲ့တာ ဒီလို မှနျကနျတဲ့ listening input မရှိခဲ့လို့ပေါ့ဗြာ။
ဟုတျပွီ။ နားထောငျရမယျ။ ဘာတှကေို နားထောငျမလဲ။ ဘယျလိုမြိုးနားထောငျမလဲ။
Stephen Krashen ဆိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျကတော့ ဒီလိုဆိုထားတယျဗြ။
ကိုယျနားလညျတဲ့အဆငျ့ကစပါ။ အခွခေံလောကျပဲရှိတဲ့သူက CNN တို့ BBC တို့လိုသတငျးတှေ သှားနားထောငျ လို့ဘယျရမလဲ။ ဖွေးဖွေးနဲ့မှနျမှနျပွောတဲ့ဟာမြိုးကိုနားထောငျရမှာပေါ့။ ကြှနျတျော နားထောငျလရှေိ့တဲ့ program တှကေတော့
ဒီ link တှကေို အကွံပွုခငျြပါတယျ။ ပထမဆုံး spotlight radio ကတော့ အရမျးစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အကွောငျး အရာတှကေို ပုံပွောသလိုဖွညျးဖွညျးခငျြးပွောသှားတဲ့အတှကျအငျမတနျမှ လှယျကူပါတယျ။ mp3 နဲ့ပွောသှားတဲ့စာသား script တှကေိုလညျး ဖတျခငျြရငျ download လုပျလို့ရပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး ကိုယျစိတျဝငျ စားတဲ့ခေါငျးစဉျတဈခုကို download လုပျလိုကျပါ။ ကိုယျ့မှာ computer ရှိရငျ အိမျမှာနားထောငျ။ မရှိရငျလညျး internet ဆိုငျသှားနားထောငျလို့ရပါတယျ။ အခုခတျေမှာ electronic ပစ်စညျးတှအေရမျးပေါလာတော့ ပညာ လလေ့ာရာမှာအသုံးခတြတျတဲ့သူအတှကျအရမျးကောငျးပါတယျ။ computer မရှိရငျလညျး DVD player လောကျတော့အိမျတိုငျးနီးပါးရှိနပွေီပဲ။ USB plug ထိုးလို့ရတဲ့ speaker လေးတှကေလညျး ကပျြ ၁၀၀၀၀ ကြျောလောကျနဲ့ဝယျလို့ရနပေါပွီ။ နောကျတဈခုက mp3, mp4 တို့ ဖုနျးကိုငျနိုငျတဲ့ သူဆိုရငျလညျး ဖုနျးဆိုတာ learning tool တဈခုပါလားဆိုတဲ့အသိလေးနဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးထဲကို ခုနက mp3 ဖိုငျလေးထညျ့၊ သှားလရော ကားစီးရငျး၊ ကားစောငျ့ရငျး၊ လကျဖကျရညျဆိုငျထိုငျရငျးနားထောငျနပေေါ့။ အပငျြးလညျးပွေ၊ ပညာလညျး ရတာ ပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတျောဆိုရငျ ညအိပျယာဝငျတဲ့အခါ mp3 ဖှငျ့ထားပွီးနားထောငျရငျးအိပျပြျောသှား၊ အိပျမကျထဲမှာ အင်ျဂလိပျလိုစကားတှပွေောနခေဲ့တဲ့အကွိမျတှမေနညျးတော့ပါဘူး။
ခေါငျးစဉျတဈခုကို ပထမဦးဆုံးတဈပုဒျလုံးပွီး အောငျနားထောငျပါ။ သူ့ရဲ့အကွောငျးအရာကို နှလုံးသားနဲ့ခံစား နားဆငျပါ။ ဒါမှ နှဈသကျမှု ရှိပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အရာကို မှတျမိနတေတျတာလူတှရေဲ့သဘာဝတဈခုပဲလေ။ နောကျတဈခေါကျထပျနားထောငျတဲ့အခါမှာတော့ ဦးနှောကျကိစ်စလေးနညျးနညျးပါလာပါပွီ။ tracking method လို့ချေါတဲ့ ရှကေ့ပွောတဲ့သူ စကားစုတဈခုစာလောကျပွီးသှားရငျ pause ခဏလုပျ၊ ကိုယျကအသံထှကျပွီးလိုကျရှတျ ကွညျ့၊ နောကျရှကေို့ဆကျသှား။ ဒီလိုနဲ့ ခေါငျးစဉျတဈခုကို အနညျးဆုံး လေးငါးခေါကျလောကျနားထောငျပွီးတဲ့အခါ presenter ရဲ့အသံထှကျနဲ့လယေူလသေိမျးကအစနားထဲမှာစှဲနပေါလိမျ့မယျ။ နားထဲစှဲရာကလိုအပျလို့ကိုယျပွောရမယျ့ အလှညျ့မှာ လှယျလှယျကူကူပွောနိုငျတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ ကြှနျတျော ဗီဒီယိုတှကွေညျ့ရငျ ကှနျပြူတာနဲ့ကွညျ့တာမြားပါတယျ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ dialogue ကလေးတှပွေီ့ဆိုရငျ အဲဒါကို mp3 ဖွဈအောငျ record လုပျပွီးပွနျနားထောငျတတျပါတယျ။ လုပျပုံလုပျနညျးကတော့ ဥပမာအားဖွငျ့ vlc player သုံးတယျဆိုပါဆို့။ ၄ငျး player နဲ့ဖှငျ့ကွညျ့ပွီး ကိုလိုခငျြတဲ့အပိုငျးကို record button နှိပျပွီးသိမျးထားလိုကျတာပါပဲ။ အငျမတနျအကြိုးရှိတဲ့နညျးလမျးပါ။ဒါကိုမှ လုပျရတာအလုပျရှုပျတယျဆိုရငျတော့ အောကျပါ site မြားမှာလုပျပွီးသား clip တှကေို download လုပျနိုငျပါတယျ။
exposure ဆိုတာကတော့ ဘာသာစကားနဲ့အထိအတှကေို့ပွောတာပါ။ တက်ကသိုလျမှာတုနျးက ဆရာမတဈဦးရဲ့ "Do something in English everyday." ဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုအမှတျရမိပါတယျ။ မိမိကိုယျကိုကိုယျလလေ့ာနတေဲ့ဘာသာ စကားနဲ့အမွဲတမျးထိတှနေ့မှောသာတဈနကေ့ရြငျကြှမျးကငျြသူဖွဈလာမှာပါ။ တတျနိုငျသမြှ ဒီဘာသာစကားကို အသုံးပွုတဲ့ အသိုငျးအ၀ိုငျးထဲကိုရောကျအောငျကွံဆနရေပါမယျ။ ကြှနျတျောတို့သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြး နောကျပွော လရှေိ့တဲ့အတိုငျး ဂပြနျစကားတတျခငျြရငျ ဂပြနျမကိုရညျးစားထားဆိုသလောကျတော့ လုပျဖို့ မလိုသေး ပါဘူး။ IT ခတျေရဲ့လူငယျတှဆေိုတော့ အငျတာနကျမှာ chatting ထိုငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ဘာသာစကားကိုလကေ့ငျြ့ နိုငျပါတယျ။
ှTip တဈခုနဲ့တငျရေးတာ နညျးနညျးရှညျသှားပွီ။ အလြှငျးသငျ့ရငျသငျ့သလို နောကျထပျ Tips မြားကိုလညျးဆကျရေးပါဦးမယျ။
ပညာသငျပေးခဲ့သော ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၊ ရနျကုနျပညာရေးတက်ကသိုလျမှ ဆရာကွီး၊ ဆရာမကွီးမြား၏ကြေးဇူးတို့ အား ဤ site တှငျတငျသောဆောငျးပါးမြားဖွငျ့ ပူဇျောကနျတော့ပါသညျ။
Permalink Reply by phoosarshinn on January 29, 2011 at 8:01
Brother,thanksalot. I appreciate your contribution. :)
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on January 29, 2011 at 9:38
Permalink Reply by chit su hlaing on May 2, 2011 at 17:36
Hello ,thank yo so much , for your discussion and share your knowledge
Permalink Reply by upokun on May 3, 2011 at 0:44
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on May 3, 2011 at 2:51
Permalink Reply by Peaceangel on May 3, 2011 at 4:04
Thanksalot for sharing your knowledge with you. That's really useful tips for the people who want to study English.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on May 5, 2011 at 9:11
thanks for reading and giving comments.
Permalink Reply by gdemo on May 5, 2011 at 15:33
Permalink Reply by Thu Zar aung on July 25, 2011 at 16:47
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကို၊ ကျွန်မတို့လို အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို လေ့လာဖို့အတွက် စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဟိုဟာကောင်းနိုး/ ဒီဟာကောင်းနိုးနဲ့ လိုက်ပြီးရှာဖွေနေရတဲ့ သူတွေအဖို့ တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်းဒီလိုစာမျိုးလေးတွေထပ်တင်ပေးပါအုံးလို့
Permalink Reply by 1tvu59ccj2avt on July 25, 2011 at 19:51
Permalink Reply by upokun on July 25, 2011 at 21:39
Thanksalot for your sharing.. Ko Zar Ni.
Permalink Reply by swin lae lae on July 26, 2011 at 1:20